Uzunkopru OSB, BALO iyo Silk Road | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara22 EdirneUzunkopru OSB, BALO iyo Silk Road
11 / 01 / 2018 22 Edirne, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, TURKEY
Ra'iisul Wasaare 2017 wuxuu furay mashruuca tareenka Kars-Tbilisi-Baku bishii Oktoobar, iyada oo 30 ay tareenka tareenka siinaysay Edirne bishii December. Dadweynaha ayaa si qalad u fahmay in mashaariicda tareenada ay diirada saaraan rakaabka. Demirtaş-sidoo kale gudaha UzunköprüHalkalı Filo soo laabashada duulimaadyada ee hareeyay. Xaalad gees la mid ah oo isbadal ah ayaa ka jirta Çorlu. Xarunta Edirne Çorlu waxay dhaafi doontaa tareenka xawaaraha sare ku dhawaaqi doona markii dadka Çorlu ay si dhab ah ula falgalaan. Yay dhahaan inuu qaadanayo?
Bal aan hadda si cad kuugu sheego waxa uu tareenkaani yahay:
Ugu horreyn, Mashaariicdan tareenka; Marmaray, 3. Buundada, buundada Çanakkale ee marxaladda qorshaynta iyo xitaa mashruuca kanaalka oo u muuqda shaqo waalan waa agab isku cunto ah. Cunnada Shiinaha waxaa loo yaqaan 'SILK WAY'.
Mashruucan balaaran ee caalamiga ah, oo uu si rasmi ah u bilaabay madaxweynaha Shiinaha Shi Jinping ee 2013, wuxuu isku xiraa meelaha ugu waaweyn ee Yurub, Afrika, Caucasus iyo Aasiya oo leh ahmiyada "saadka ganacsiga". The $ 2014 40 billion magaalada Zone Dhaqaalaha Road Silk Shiinaha aasaasay Fund iyo bishii November ee sanadkii la mid ah ayaa sidoo kale Turkiga ayaa si wadajir ah $ 100 billion Kaabayaasha Asian Bank Investment, caasimadda. halkan dowladda Turkiga dhismaha line la siiyey $ 30 billion qoondaysnaa.
Wadada ugu istiraatiijiga ah ee IPEK ROAD PROJECT, oo ka kooban wadarta guud ee xargaha 6, waa London-Paris-Moscow-Scandinavia-Balkans-THRACE-Ankara-Tehran-Baku iyo khadka tareenka Beijing. Qadka THRACE hadda waa cad yahay.
Wadada Edirne-Istanbul waxaa sabab u ah isku xidhka Sofia. Waxaan qorey oo wax badan u sheegnay waqti badan. Eskiköy'e ayaa xoogaa yar oo mala-awaalayaal ah oo lacag ka sameystay, Uzunköprülüler ayaa ka dhaqso badan kan jaban si uu u aado dalka Gariiga si uu madax madax uga noqdo rakhiisku ma raacdeeyo qaab darrooyinka furitaanka caadooyinka. Waxaan leenahay Demirtas, oo la mid ah caadooyinka. Aynu ugu ololeyno dhinaca Griiga Aan wada xiriirno Sofia isku xirka Istanbul illaa Pityon-Uzunköprü. Go'aanka kama dambaysta ah ayaa si cad u sheegay in lacagta iyo milkiilaha mashruuca Shiinaha laga leeyahay. Waxaan gaynay aag xor ah, waxaan nimid caadooyin gaar ah, waxaan dhahnay Allaah. Waxaan Ma garan karo. Sikastaba, looma baahna inaad diirada saarto wixii tagay. Maxaa yeelay fursadu way sii socotaa. Sidee?
Sidaad si cad u fahmi karto, Mashruuca SILK ROAD PROJECT waa mashruuc lagu qaado gaadiidka, ma aha rakaabka. Xaqiiq ahaan, waddan kasta oo ku lug leh mashruucu wuxuu isku xiraa aagagga warshadaha ee ugu muhiimsan mashruuca IPEK YOLU iyo mashaariicda maxalliga ah. Qodobadani in hab Turkey ayaa fuliyay by TOBB oo si kooban loo yaqaan mashruuca Greater Anatolia Logistics Ururada kubada. Hadafka BALO waa isku mid sida kan wadamada kale. Si loo bixiyo adeegyo gaadiid ku-meel-gaar ah inta badan waaxda tareenka. Xarunta Thrace ee BALO waa dekeda Tekirdağ. Wadada tareenka ee ku xira Aasiya Porta ayaa runtii soo jiidatay indhahaaga. Xitaa Barbaros-Altinova-Ramada Hotel ee aagga u dhexeeya aad planlanlandığı dhegta u yimid sidii logistics dhafan saldhigga ugu weyn ee Turkiga. Ugu yaraan kuwa raaca qoraaladayda waxay xasuusan doonaan BALO sannado iyo inaan ka dhawaajiyay socdaalada soo socda. Hadda, iyada oo aan si kale loo qaadan, waxaan arrinta u keenayaa Uzunköprü Mixed Organised Region (UKOSB).
Hal khariidadda Thrace ee mashaariicda BALO dhinac iskugu saar iyo faa iidada saadka ee Uzunköprü keligaa. Faham in UKOSB ay fursad weyn oo taariikhi ah u tahay Uzunköprü. In kasta oo aan ugu hambalyeynayo UTSO dhinaca kale, dhinaca kale, iska ilaalinta soo dhowaanshaha aagga warshadaha ee Hanzo oo leh joogtaynta Hayrabolu OIZ; Fahmaan sababta naloogu cadaadiyay inaan ka tagno kuwa kibirka weyn ee isla weyn, oo haddana sii dheer, si aan u sameyno qorshe aragti fog oo wajiga koowaad ah.
Waxaan ula jeednaa dakhliga soosaarka ee warshadaha leh UKOSB iyo sii xumaanshaha warshadaha nadiifka ah taas oo ka dhigaysa shaqo u qalma iyo dhoofinta. Qaabka ugu saxsan ee aad uga heli karto kala-duwanaanshahaani waa inaad bixiso faa'iido macquul ah. Qiimaha xamuulka iyo keenida degdegga ah waa qodobka ugu muhiimsan ee warshadaha Hi-Tech. UKOSB ilaa BALO; sidaa daraadeed aragtida is dhexgalka ee IPEK ROAD, oo iskuxi doonta Yurub, Russia, Africa, Iran, Caucasus, Asia iyo China, waa inay ku dhufato 12. Xarunteena waa qalab khatar ah. Way iska cadahay waxa loo baahan yahay in la qabto. Hadafkayagu waa inaan ku xirno Demirtaş iyo BALO illaa UKOSB. Oo fadlan ogow; Aagga bakhaarka leh ee ruqsada haysta ee leh xaaladda hadhuudhka ayaa loo dejin doonaa laba tallaabo oo ka baxsan UKOSB. Sidaa darteed, Uzunköprü wuxuu leeyahay dhammaan agabkii uu ku noqon lahaa saadka, wax soo saarka iyo xarunta keydka adduunka. Waxaan ugu yeerayaa ducadan amine; rumaystaha iyo "ogaanshaha" ka warran adiga?
Ballaaran iyo Tareenada Eurocity-ka ee Isku Jira Jarmalka | Tareenka da'da yar ayaa shil galay (Video)
6 A Bridge-Long Long Bridge si loo soo celiyo
Uzunkopru waxay noqon doontaa buundada dhagax ee ugu dheer ee UNESCO
Maanta oo Taariikh ah: May 21, 1941 Markale dib loo furay Wadada tareenka ee Svilingrad-Uzunköprü…
Maanta taariikhda: 21 May 1941 Dib-u-dhiska wadooyinka tareenka ee Svillad-Uzunköprü ...
Maanta in History: dhexeeya July 4 1941 Uzunköprü-Svilingrad ma iska leh Turkey
Mashruuca wadada Silk Road
Mashruuca Ururada Sare ee Aagga Sare ee Aagga